1. Manje izibani zelanga zihlala isikhathi esingakanani? Ngokuvamile, amabhethri amalambu angaphandle elanga angalindelwa ukuthi angahlala cishe eminyakeni engu-3-4 ngaphambi kokuthi adingeke ukuthi ashintshwe. Ama-LED ngokwawo angahlala iminyaka eyishumi noma ngaphezulu. Uzokwazi ukuthi sekuyisikhathi sokushintsha izingxenye lapho amalambu engakwazi uku ...
Lokho okwenziwa isilawuli senkokhelo yelanga
Cabanga ngesilawuli sokushaja elanga njengomlawuli. Iletha amandla kusuka kumalungu afanayo we-PV kuya kumithwalo yesistimu kanye nebhange lebhethri. Lapho ibhange lebhethri selicishe ligcwele, isilawuli sizokhipha amandla wamanje wokushaja ukuze kugcinwe amandla kagesi adingekayo ukuze ishaje ngokugcwele ibhethri futhi igcine icishiwe ...
I-Off-grid Solar System Components: yini oyidingayo?
Ukuze uthole uhlelo olujwayelekile lwe-off-grid solar udinga amaphaneli elanga, isilawuli sokushaja, amabhethri kanye ne-inverter. Lo mbhalo uchaza ngokuningiliziwe izingxenye zesistimu yelanga. Izingxenye ezidingekayo kusistimu elanga eboshwe ngegridi Zonke izinhlelo zonozungezilanga zidinga izinto ezifanayo ukuqala ngazo. Ububi besistimu yelanga oboshwe ngegridi ...